Chimney Group သည် DaVinci Resolve Studio နှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မီးဖိုထဲက Group မှ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုနှင့်အတူဂလိုဘယ်ချဲ့ Continues
မီးဖိုထဲက Group မှ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုနှင့်အတူဂလိုဘယ်ချဲ့ Continues
Fremont, CA - ဧပြီလ 29, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့မီးခိုးခေါင်းတိုင်အုပ်စု, ဥရောပအကြီးမားဆုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတဦး, အမေရိကန်, အရှေ့တောင်အာရှ, သြစတြေးလျအပါအဝင်ဒေသများသို့၎င်း၏လျင်မြန်တိုးချဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စတူဒီယိုဖြေရှင်း DaVinci ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီ။ ကြေညာလိုက်ပါတယ်
1995 အတွက်ထုတ်လုပ်သူ Henric Larsson တည်ထောင်ထားတဲ့, မီးဖိုထဲကလျှင်မြန်စွာစတော့ဟုမ်းအတွက်ရှေ့ဆောင် post ကိုထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဂုဏ်သတင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယနေ့ပြုလုပ်ကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများအပါအဝင်ကိုးဦးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအတွက် 400 ရုံးများဖြတ်ပြီး 14 န်ထမ်းထက်ပိုအထိချဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ footprint ကိုဂုဏ်ယူ Los Angeles မြို့ (LA), စင်ကာပူ, ဘာလင်နှင့်ဆစ်ဒနီ။
မီးဖိုထဲ Group မှယခုယင်း၏တစ်ခုလုံးကို non-linear အယ်ဒီတာတစ်ဝှမ်းပြီး workflow နှင့်အရောင်ဆုံးမခြင်းပလက်ဖောင်းစံခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကအတိတ်ကာလပြီးသွား tools တွေအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြပေမယ့်ဘာမျှမရဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုဖြေရှင်းဖို့နီးကပ်လာပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုများအတွက်လူသတ်သမားဖြေရှင်းချက်ရဲ့ "ခေါင်းတိုင် Group ၏ Henric Larsson ကပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဖန်တီးမှုစက်ရုံအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမြင်တတ် "အစဉ်အမြဲဈေးကွက်မှပရောဂျက်ရဖို့လိုအပ်ဘာလဲဆိုတော့အချိန်လျော့ကျလာအတူအသုံးပြုကိုက်ညီမှတဆင့်စတင်ခြင်း DIT ထံမှတစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာသေချာ, အရောင်နှင့်ဖြန့်ဝေ: ထည့်သွင်းခြင်း။ ကျနော်တို့အေ့စ်အရောင်စီမံခန့်ခွဲမှု, IMF ကဖြန့်ဝေနှင့်ဦးတည်း box ထဲက HDR mastering ကိုထောကျပံ့ပေမယ် NLE toolset အနာဂတျတှငျအခြို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့ options များဖွင့်နိုင်ပါတယ်မသာ။ "
ထိုကဲ့သို့သော New York မှာမီးခိုးခေါင်းတိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် 6,000 စတုရန်းပေရုံးအဖြစ်အသစ်ကစတူဒီယိုဖွင့်ဘို့အထိပ်ကိုအခွက်တဆယ်ဖို့လွယ်ကူ access ကို, အပြောင်းကုန်ပြီအခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကလောင်နဲ့တွဲပြီးတည်းဖြတ်ရေးနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှစ်အစုံနှင့်အတူသစ်ကိုစတူဒီယို Unilever, ESPN နှင့် Microsoft ဂုဏ်ယူတဲ့ client ကိုတန်းစီဇယား servicing အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောခေတ်မီပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"Multi-Platform ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူကြောင့်ကျနော်တို့ကအများကြီးပိုလွယ်ညာဘက်ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခွက်တဆယ်လေးလည်းတွေ့ပါ, ဆိုလိုတာကပြီးတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းစံဖြစ်လာနေပါတယ်" ဟု Henric နေဆဲဖြစ်သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များလိုအပ်နေရာတိုင်းမှာဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခြေရာကိုအတွင်းရှိပြီးသားအခွက်တဆယ်ကိုဝင်ရောက်နှင့်ထိုစွမ်းရည်များချထားပြီးဖြေရှင်းရန်ရဲ့ဝေးလံခေါင်သီငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်စွမ်းရည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ "
မီးဖိုထဲ Group မှအရာ၏ခိုင်ခံ့အားပေးထောက်ခံသူတွေဖြစ်ကြ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထိုကဲ့သို့သော DaVinci အဖြစ်ဖန်တီးမှု tools တွေကိုပိုပြီးလက်လှမ်းဖြေရှင်းစေရန်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ "လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း ပို. ပို. ဖန်တီးမှုများဒါမဟုတ်ရင်ပွုပါပွီမပြုစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည် DaVinci ဖြေရှင်းရန်အပေါ်သူတို့သွားဖြတ်တောက်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်," Henrik အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ "ဒီကပိုသုံးစွဲနိုင်သည့် paintbrush ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များ, ပိုအခွက်တဆယ်ဖြစ်ပြီးကျနော်တို့အနာဂတျတှငျမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ လူတိုင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ "
DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံစတူဒီယိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
အကြောင်းအရာ Blackmagic ဒီဇိုင်း
Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ထုတ်ကုန်ဖန်တီး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာ, အရောင် correctors, ဗီဒီယို converters အဖြစ်, ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်မှု, router များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု Switcher, disk ကိုအသံဖမျး, waveform မော်နီတာနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်ရုပ်ရှင်စကင်နာ။ Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကို DaVinci အရောင်ဆုံးမခြင်းထုတ်ကုန်အနိုင်ရကုမ္ပဏီ၏သူဟာ Emmy ™ဆု 1984 ကတည်းကရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးစိုးခဲ့ကြစဉ် DeckLink ဖမ်းယူကတ်များ post ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အရည်အသွေးနှင့်တတ်နိုင်အတွက်တော်လှန်ရေးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း 6G-SDI နှင့် 12G-SDI ထုတ်ကုန်များနှင့် stereoscopic 3D အပါအဝင်မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်တီထွင်မှုဆက်လက်နှင့် က Ultra HD Workflows ။ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအယ်ဒီတာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများဦးဆောင်လောကကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Blackmagic ဒီဇိုင်း ယူအက်စ်အေ, ယူကေ, ဂျပန်, စင်ကာပူနှင့်သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ရုံးတွေရှိတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး www.blackmagicdesign.com.
DaVinci Resolve စတူဒီယိုတွင် Element Pictures ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်ဘီဘီစီနှင့် Hulu ၏ပုံမှန်သာမန်လူများ၊ - ဇူလိုင်လ 1, 2020
Frame.io သည်“ အိမ်မှလုပ်ငန်းအသွားအလာ” စီးရီးနောက်ဆုံးဖြစ်သောရုပ်ရှင်ရုံ၏အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုသည် - ဇွန်လ 30, 2020
LA အခြေစိုက် Creative Agency Sandwich မှ Lunchbox သည် Slack Commercial အသစ်အတွက် Pocket Cinema Camera 6K နှင့် DaVinci Resolve Studio တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ - ဇွန်လ 29, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ blackmagic Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မီးဖိုထဲကအုပ်စု DaVinci ဖြေရှင်းရန် davinci သန်နိဋ်ဌာနျ studo တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-04-29
ယခင်: 4G-SDI ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ Magewell သင်္ဘော dual-Channel ကို 12K Capture အ Card ကို
နောက်တစ်ခု: Facilis တစ်နှစ်တာဆုကို၏ 2019 NAB Show ကိုကုန်ပစ္စည်းဆွတ်ခူး